နေရာ မှားပြီး ရှင်သန်မိတဲ့သစ်ပင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » နေရာ မှားပြီး ရှင်သန်မိတဲ့သစ်ပင်
နေရာ မှားပြီး ရှင်သန်မိတဲ့သစ်ပင်
Posted by alinsett on Dec 18, 2014 in My Dear Diary, Poetry | 16 comments
နေရာမှားနေတဲ့သစ်ပင် မောင်သူရ ပြောချင်တဲ့စကား
ငါ့ကိုယ်ထဲ တစ်ယောက်ယောက်များ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မိလေသလား. . .
ဒါမှမဟုတ် ငါကပဲ. . .
တခြားတစ်ယောက်ယောက်ထဲ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့လေသလား. . .
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရဦးမယ်. . .
ငါဟာ ဘယ်လိုမြေပြင်မှာ ရှင်သန်ခဲ့တဲ့. . .
ဘယ်လိုအပင်က . . .
ဘယ်လို သစ်သီးများလဲလို့. . .
၂၀၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၀
သများတွေ လိုက်ဝေဖန်နေတာပဲ ဖတ်နေရတယ်
မောင် အလင်းဆက် ဒီမှာ စရေးကာစက ဘာမှန်းညာမှန်းမသိလို့ ၀င်ဖောခဲ့ဖူးတဲ့လေနဲ့ ဖောမယ်
(နေရာ မှားပြီး ရှင်သန်မိတဲ့သစ်ပင်)
အဲ့လိုဆိုရာမှာ စာလုံးအထားအသိုလွဲနေရာကနေ ဖတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ တစ်ကယ်ဆို ” နေရာမှားပြီး ရှင်သန်မိတဲ့ သစ်ပင် ” ဆို နေရာအထားအသိုမှားနေတဲ့ သစ်ပင်ဆိုတာကြီးကို ဆိုတယ်လို့ ဆိုမှာလို့ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကတည်းက သိမှာပေါ့နော်။ ခုတော့ “နေရာ” ဆိုတာကြီးကို အထူးပြုထားမှန်း သိသာနေတော့ ရှင်သန်နေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို ဂရုမပြုမိတော့ဘူး။ (ဒီနေရာမှာ ပုဒ်ဖြတ်လေးက ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်ပြောတာ)
ဆိုတော့.. အရင်လိုစိတ်နဲ့ဆို အားမနာတမ်း စိတ်ထဲရှိတာတွေ လျှောက်ပြောမိဦးမယ်။ မောင်အလင်းဆက် အရင်ကစာရေးတာလို စာပိုဒ်မခွဲ၊ စာမဖြတ်၊ တစ်ဆက်တည်း အစကနေအဆုံးထိ ရေးချင်သလိုရေးသွားတာကို ၀င်ပြီး ဝေဖန်ရေးနဲ့ လေကန်ရေးလုပ်သလိုပေါ့။
ခုတော့ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်မိလို့ ဘာများ ထူးဆန်းတာရေးမလဲတွေးတော့ ၀င်ဖတ်မိတယ်ပေါ့နော်။
တိုပေမယ့် မတုတ်တော့ မထိဘူးကွယ်။
ထောင့်ပေါင်းစုံက ဝေဖန်မှာကို ပိုကြိုဆိုပါတယ်
အထူးသဖြင့် အားမနာတမ်းဝေဖန်မှာကို အထူးအထူးအထူး ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျနော်က ကဗျာဆိုရင် သဒ္ဒါကို လှည့်မကြည့်ချင်ဘူးဗျ
ပြောချင်တာက ဝါကျရေးထုံး အစဉ်အလာ
စတာတွေ အကုန် အကုန်
ကုန်ကုန်ပြောရင် စကားလုံး စာသား တွန့်တွန့်ကောက်ကောက်
ဘာသာစကား အက္ခရာတွေနဲ့ ရေးမှ ကဗျာဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကိုတောင် တွန်းလှဲချင်နေတာဗျ။
အက္ခရာ တွန့်တွန့်ကောက်ကောက်တွေ မပါပဲ မသုံးပဲ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့
ကဗျာတွေ ကျနော် ရေးထားတာ ရှိတယ်
အဆဲမခံနိုင်သေးလို့. . မပြဖြစ်သေးတာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအား မရတဲ့ နယ်စွန်နယ်ဖျားဒေသတွေဆီသာ
အစိမ်းရောင် မျက်တစ်ပင်ပါကွီ….. ခိခိ မရှဲနဲ့နော် တေမယ်
မြတ်ပင်နုနုပေမယ့် အုတ်ကိုတောင် ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ မဟာ အာဂမြတ်ပင်ပါလားကွယ်ရို့။
အရှိုးရရဲ့ ထမင်းအနပ်အဖြစ် ခုတ်လှဲခံ ရောင်းချခံရရှာတဲ့
ကိုရင်ကို သတင်းကောင်းပေးမယ်… ကမ္ဘာ့စာပေလောကမှာ ရသစာပေရယ်လို့ စတင်ထွန်းကားတဲ့ အချိန်မှာ စာပေဦးကင်းက ကဗျာပါတဲ့ဗျာ… နန်းရင်ပြင်မှာလည်း ကဗျာ၊ ကျေးလက်လယ်ကွင်းထဲမှာလည်း ကဗျာ၊ တမိုးလုံးဖျောက်ဆိတ် ဆိုရလောက်အောင် တဲ့ဗျား… ၁၈၃၀ ပြည့်နှစ်မှာမှ နော်ဗဲခေါ်တဲ့ အရာက နန်းချခဲ့ပါတယ်တဲ့…
ချစ်တယ်. . . ကဗျာရယ်. . .
သစ်ပင် နေရာမှားတာ ကိတ်စနမရှိ။
သစ်သီးနေရာမှားမှ အခူးမခံရပဲ နေရော့မယ်။
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ ကံအဆိုးဆုံးအချိန်မှာ အိမ် ထောင် ကျတတ်တယ်တဲ့။
အောင်တျဲလင်း ဟိုသဂျားမတျောက် ဘာတွေဖစ်နေတာဒုံး
ရွာထဲမတော့ မတွေ့ဝူးနော် ခိခိ :D
သုကို ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ စွတ်ချွတ်တူတယ်လို့ ပြောပြီး
သုပုံနဲ့ ဖြူဖြူ့အိုက်စတင်ပုံတွေ ယှဉ်ပြမိ
သုကို ဖြူဖြူမာဃ လို့ အမည်ပေးမိလို့
​နေရာမှား​​ ​ပေါက်​​ပေမဲ့ ဗမာ့ ​ရေ​မြေ ရာသီဥတုနဲ့ ​တော့ ရှင်​သန်​ နိုင်​ပါ​သေးတယ်​ ။ အဲ့ ဒါကို​တော့ ကြံဖန်​ ​ကျေးဇူးတင်​သင့်​တယ်​နဲ့ တူရဲ့